Date My Pet » Zvokuita On A First Date By Zodiac Sign
Last updated: Chivabvu. 31 2020 | 5 Maminitsi verenga
misi First nguva dzose kukuomera nokuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Uri kufara kuti zuva, uye yaaizova ndezvipi kuuya, asi muchifunganya pamusoro kuita zvakanaka pfungwa. Part kuita zvakanaka pfungwa zvinoreva kuronga zuva kuti mumwe munhu vachawana, asi ungazviita sei kuti kana iwe hauzivi zvakawanda nezvazvo asi? Kana uchiziva kwavo chiratidzo Zodiac, edza utilizing kuti kukubatsira kuronga zuva akakwana. kuverenga:
Kana uri kuenda kufambidzana nemunhu yechinguva, nechokwadi zviri kuenda kuva inonakidza. An yechinguva haigoni kumira kugara vakanyarara refu chaizvo, uye anofanira kuita chinhu nguva dzose. Kuita rinonetesa basa panze, akafanana Hiking kana cu, aigona kushanda kwavari. Kana uchida kugara mumba, edza indoor dombo kukwira. Iva nechokwadi muende kubva chikamu mumwe musi unotevera nokukurumidza pasina kupedza nguva yakawandisa pazvinhu dzaifanoiswa kana munhu nzvimbo kana vagokunzwisisa vasafarira kutsanya – musi pamberi kunyange pamusoro!
Kana uri kuenda musi ane Taurus, vanoziva kuti vari chiratidzo chokuti anotonga pfungwa, saka kuita chinhu chichaita kuti vanoita vakasvinura unonyatsoshanda. Enda akanaka resitorendi kuti ane zvokudya zvoumbozha, vapinde waini anoravira, usiku kutamba, kana kuenda kune konzati. Kwose kwaunoenda, takagadzirira kushandisa mari nokuti Taurus anoda hwokusanyara. Kuva nenyika chiratidzo, havaiti kunotiyeuchidza kuva akanaka kupikiniki panze chero bedzi havasi yakawanda netsikidzi kumativi, saka kana ukaenda kuti nzira, kuunza vamwe citronella makenduru.
Kana uri kuenda musi ane Gemini, kuatora kumwe inotonhora, shaya hanya, uko vanhu vakawanda ringa kuvarinda mupfungwa kwakamutsa, uye apo unogona kuva vakasvinuka kukurukura. Chengeta misoro chiedza uye mupumburu pavanoshanya rakakurumidza kuchinja nyaya. Havazivi kumboita chero nzvimbo kuti ruzha kana chaizvoizvo zvokuita, Akafanana netsvimbo, uye chaizvoizvo saizvozvo. Vanogona vanoti vanoda zvarisingazivi zvinhu, asi chiratidzo ichi anofunga vanonyanya zvarisingazivi kupfuura chaizvo, saka regai muvabvise kure kunze kwavo kunyaradzwa mapazi.
Kana uri kuenda musi ine Cancer, vazviise kumwe ndiko avanoziva, kumwe munoziva kuti wakambopinda pamberi. Vanoda wajaira kuti vanzwe vakasununguka uye vanobvuma kuvhura kwamuri. A resitorendi yakanyarara kungangova nepaunogona bheji, kunyanya kana ivo vanoshumira nyaradzo zvokudya uye vane zvigaro panzvimbo dzakaoma chair. Udza hweta kwete kutambudzirei vaviri nemiwo zvakawanda saka vane nguva yakawanda yokuva akasununguka newe, uye vaviri munokwanisa batanidza mupfungwa.
Kana uri kuenda musi ane Leo, ichi ndicho chiratidzo chokuti anoda mutambo, saka edza kuenda kufirimu kana yemitambo. Kana ukaenda kune mafirimu, nechokwadi zviri ichangobva flick aine nyeredzi, uye kana ukaenda yemitambo, nechokwadi zviri Hottest anoratidza uko izvozvi. Ivo vanoda kunzwa vari pamwe vari revanhu, saka kwose kwaunoenda, kuti rinopisa nzvimbo. Kana vari nakisa flirty pamwe kwete iwe, asi munhu wose wasvika neZvapupu, inzwa wakasununguka kuratidza negodo shoma. Chaizvoizvo Vanoda kuti.
Kana uri kuenda musi ane Virgo, musaita chinhu chikuru kana kuti zvinhu, uye regai muvabvise zvapo ruzha kana takabatikana. Ita izvozvo nzvimbo yakanyarara apo vanogona kunzwa pfungwa dzavo. Havachina inoshanda chaizvo, uye vangasanzwisisa kana muchiita chinhu flamboyant, hazvinei kuti kudanana uchifunga kuti. Virgo ndicho chiratidzo utano, saka edza kuresitorendi inoshanda zvokudya utano, kana kuenda yokurovedza muviri navo. Ivai nechokwadi kuti imi kuzorodza dzavo kutyira nokukurumidza, kunyanya pamusoro miviri yavo, saka kubhadhara zvimwe wose compliments.
Kana uri kuenda musi ane Libra, tora navo unyanzvi miziyamu, Art Gallery, kana iwe ratidza. Ichi ndicho chiratidzo chokuti anoonga zvinoyevedza okuti zvikuru. Unogona kuita chinhu oumhizha navo, nokuenda zvehari girazi kana kuti glassblowing Studio. Vachada kunakidzwa chiito rakasikwa chinhu newe. Unogonawo kuedzawo kuenda Newest, trendiest gwapa muguta, kana zviri kuresitorendi, kirabhu, kana Park. Libras somunhu-on-imwe pfungwa, saka kunyange dai unenge wakapoteredzwa nevanhu, maziso enyu pamusoro pavo.
Kana uri kuenda musi ane Scorpio, hachibvi nzvimbo rima chiedza. Vari mwoyo murima, saka hapana zuva mazuva. Vanogona kuva namazizi usiku zvakare, saka inzwa wakasununguka kutanga musi vanonoka. Vanoda sainzi, saka unogona kuedza munhu sayenzi miziyamu, kunyanya kamwe vakawanda vakaenda uye kunogona zvachose oga nemi. Vanewo Vanoda divi rakashata upenyu uye kunorambidzwa nyaya, saka kana iwe unogona muvabvise kumwe pakubata pabonde, rufu, kana ropa uye ushingi, vanenge squeal vachifara.
Kana uri kuenda musi ane Sagittarius, ngaawone rainakidza. chiratidzo ichi anoda kuita zvinhu ari chero zvaidiwa, saka zvimwe chero waronga haazorambi chaizvoizvo zvichaitika. Uchaita kutanga kubuda zvakanaka, asi zvino Tsaukira kumwewo, saka kufamba nayo. Sagittarius anoda dzimwe tsika uye nyika, saka tora navo kuresitorendi inoshanda zvekumwe chili, uye kana iwe unogona kutora rwendo, zviite. Kana zviri pedyo uye imi garai maawa mashoma, kana iwe kusvetukira ndege uye kuyambuka nenyanza, vari kumusoro kuti motokari. Chinhu zvakanyanyisa aigona Zvinoshandawo, kufanana skydiving.
Kana uri kuenda musi ane Capricorn, kuti sezvo chinyakare sezvo uchigona. Chisvusvuro uye firimu iri-kunaka pamwe chiratidzo ichi. Havadi kuita kusundidzirwa kunze kwavo kunyaradzwa mapazi, uye vanoda kuita chavanotoziva zvakanaka. Omerera romuzvarirwo kwavari uye kugara kure vanopenga. Kana unogona kutora kuti chisvusvuro bato apo mijenya vabudirire, vanhu zvinokosha vachava, kuti ndichava zvibodzwa imi vamwe zvakakomba pfungwa. Vanoda kuti hobnob nevanhu kukwira evanhu manera.
Kana uri kuenda kufambidzana nemunhu Aquarius, kuti sezvo zvisina kujairwa sezvo uchigona. chiratidzo ichi anoda zvinhu kujairika uye vakasiyana chero ivo dai havawanzodi, saka vanosundira kusvikira kunze aunenge wajaira sezvo uchigona. Unovaona uyewo hwomutambarakede muboka zuva, kunyanya nokuti vanoda kuva shamwari newe pakutanga saka vanoedza irambe kurongwa. Enda kunzvimbo dziri eco ushamwari, guru pamusoro marara, kana apo unogona kuita zvimwe zvokuyamura basa pamwe chete, kufanana Atora nemarara, achizvipira vari muto kicheni, kana kuenda rinoyamura chisvusvuro.
Kana uri kuenda musi ane Pisces, ziva kuti chiratidzo ichi nakisa kudanana, zvichida kupfuura chero, saka Vachaonga chero sappy nemasaini. A kudanana chisvusvuro apo uri serenaded uye tambo quartet anoenda iwe famba pamahombekombe chinhu ivo dai kuda. Pisces anoita kuda mvura, saka unogona kuenda kuresitorendi uko uchawana mvura maonero. Ivowo vanoda mimhanzi, saka edza kuva konzati, nezvimwe, kana kubuda kutamba. Chaizvoizvo kungoda kuva pedyo nemi. Oddball sarudzo? zoo. Vanoda mhuka.